Leylo Maxamuud | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Waa qoraa ka tirsan Afrikaan. Waxay wax ka qortaa arrimaha horumarinta bulshada, caafimaadka gaar ahaan dhalaanka iyo hooyada, cilmiga Bayolojiga, taariikhda, xisaabta, juqraafiga, cilmiga bulshada iyo waliba waayo aragnimada nolosheeda. Qoraagga waa qoraa marwalbo u hawlan horumarinta iyo isbedelka bulshada.
Faa’iidada Ay Caruurta u Leetahay Caanaha Naaska Hooyada
Leylo Maxamuud, October 28, 2018
Caanaha naaska hooyadu waa quudka ugu horeeya ee uu dhadhamiyo marka uu aadamuhu u soo baxo ifka dunida aynu ku noolnahay guudkeeda, waxa Alle (SW) ugu manno sheegtay inuu ku hannuuniyay ilmaha yari inuu urriyo caanaha naaska hooyadii, hannuunkaasoo aynu ku arki karno indhaheena, waa haddii aynu doonayno in aynu wax ka ogaano. Sidoo kale, mucjisooyinka hannuunkaas waxa ka mid ah, in ilmaha yari leeyahay awood kala soocda caanaha uu ka jaqayo hooyadii iyo caanayowga kale, sida ay xaqiijiyeen dhakhaatiirta caafimaadka adduunku, waxa ay sheegeen, in uu ilmaha yari leeyahay awood uu ku kala garto hooyadii iyo hooyooyinka kale, waxaanay …
Siddee Ku Ogaani Kartaa Inaad Tahay Qof Caqli Badan?
Leylo Maxamuud, October 27, 2018
Ma dooonaysaa in aad qof maskax badan noqotid? ma doonaysaa se in aad caruurtaada ku caawisid in ay dugsiga kaalin sare ka galaan? ay helaan awood iyo firfircooni aad u saraysa?hadaba haday jawaabtu tahay haa… waa in aad siisaa naftaada iyo caruurtaadaba kaluunka nooca loo yaqaano Salmon!! Kalluunka noocan ah ayaa waxa weeye mid loo amaanay caafimaadka, waa uu colories yaryahay amaba dux yar yahay isla markaana waa macaan, kaluunka Salmon-ku waxa aad ka helaysaa 415 Calories, 46g oo Protien ah, 0 Carbohaidrate, iyo 23g oo dux ah, waxaanuu ku qani yahy Acid-dha nooca loo yaqaan Omiga3 iyo duxda …
Kalluunka Noocani Waxa uu Aad Ugu Wanaagsan Yahay Caafimaadka Maskaxda |Tukesomalism.com
Leylo Maxamuud, October 10, 2017
Ma dooonaysaa in aad qof maskax badan noqotid? ma doonaysaa se in aad caruurtaada ku caawisid in ay dugsiga kaalin sare ka galaan? ay helaan awood iyo firfircooni aad u saraysa?hadaba haday jawaabtu tahay haa… waa in aad siisaa naftaada iyo caruurtaadaba kaluunka nooca loo yaqaano Salmon!! Kalluunka noocan ah ayaa waxa weeye mid loo amaanay caafimaadka, waa uu colories yaryahay amaba dux yar yahay isla markaana waa macaan, kaluunka Salmon-ku waxa aad ka helaysaa 415 Calories, 46g oo Protien ah, 0 Carbohaidrate, iyo 23g oo dux ah, waxaanuu ku qani yahy Acid-dha nooca loo yaqaan Omiga3 iyo duxda nooca …
Calaamadaha Uurka Lagu Garto
Leylo Maxamuud, October 5, 2017
Waxaa jira dhowr calaamadood oo lagu garto inay haweeneydu uur qaadday, ha yeeshee calaamadahaasi middoodna keligeed kuma filna inay tusaale cad u noqoto jiritaanka uurka, balse waa in la helaa iyaga oo isku duuban si loo hubiyo in uur jiro. 1. Caadada oo istaagta:- Calaamooyinka lagu garto uurka bilawga ah tan ugu caansan, uguna saxsani waxa weeye caadada oo joogsata. Ha yeeshee, haddii ay dhacday faxlistu waxyar kahor imaatinka dhiigga caadada, waxa suuragal ah inuu dhiiggaasi caadadu soo laabto bisha dambe, sababta oo ah xawadii u gudubtay ilma-galeenka ayaa dul meereysanaysa ugxan-sidaha iyada oo sugaysa ugxan soo baxda, taasi oon …
Waa qof aan ku qaddarineynin, isla markaasna ay la xunyihiin waxwalba oo aad adiga soo jeedisid. Waa qof aan kugu kalsooneen, oo waxwalba oo xumaan ah kaa suga. Waa qof ku caaynaaya markuu kula hadlaa, oo aan afkiisa eray macaan laga maqleynin inuu asiga goaansaday maahane, micnaha aad adiga wanaag kasta oo aad sameysid agtiisa xumaan ka yahay, laakiin adoo xumaan ku sameeyay iska kaa amaanaa mararka qaarna.Waa qof marka aad aragtid aad isku diyaarineesid sida aad isku difaaci laheeyd, iyo erayadii aad ku raali gelin laheeyd. Waa qof aan hadalkaaga waxba ka soo qaadin, in aad ooysid iyo inaad …
Dhibaatooyinka Ay leedahay Daawada Jilcisada
Leylo Maxamuud, September 17, 2017
Qoraalkaan waa qoraal kooban oo aan kaga hadlaayo dhibaatada ay leeyihiin daawooyinka jilcisada. Mawduucaani waa mid la fahmi karo waxa aan kaga jeedo mana rabo inaan kusii fogaado sharaxaada dheer ee cinwaankaan. Hadalka oo la dheereeyo waxaa ka timaado ceebo badan balse nururka cinwaankaan aan u gudubno.Walxaha loo isticmaalo in tinta lagu jilcisada oo ay ka mid tahay daawo madoobeysada waxay leeyihiin dhibaatooyin badan oo qaarkood qofka haddii ay haleelaan u dhiman karo. Daawo jilicsada waxay ka samaysantahay walxo kiimiko ah. Dhibaatooyinka fudufudud waxaa ka mid ah: 1. Xajiin iyo cuncun korka ah, xajiintaan oo heerar kale leh qaar cuncun …
Sidda Aad Ku Kasban karto Dadka Wanaagsan
Leylo Maxamuud, September 8, 2017
Fahamka Nolosha: Sidee ku kasban kartaa asxaab badan oo wanaagsan?Saaxiibku waa xubin wanaagsan oo ay u baahan tahay naftaadu, xubintaasoo ah mid aad u baxsanayso markasta oo aad u baahato. Noloshu kama maaranto saaxiib wanagsan oo ku garab taagnaada, haddaba waxaa loo baahan yahay inaad ilaashato asxaabtaada ama aad dhaqato abuuratana asxaab kale oo wanagsan tayo iyo tirabana leh. Waxaa hubaal ah haddii aad ku dhaqanto talaabooyinkaan tirsan inaad mudo kooban ku samaysanayso asxaab badan oo ku anfacda: Ka fogoow Muranka: Saaxiiboow/saaxiibeey haddii aad ka fogaato muranka waa wadada kuu sahli karta inaad Is fahamtaan dad badan oo wanagsan …
Calamadaha Lagu Garto Macalinka Wanaagsan.
Leylo Maxamuud, June 18, 2017
Macalinku waa bini’aadan, waa iftiinka nolasha ardayda. Macalinka wanagsan astaamo farabadan oo lasoo koobi karin ayuu leeyahay. Macalinka markasto waxa oo u taaganyahayinnuu wax baro ardayda markasto wax un buu raadiyaa si uu usoo saaro arday wanagsan. Waxaa jirra dad badan oo ay ka mid yihiin ardayda uu macalinka wax baro inaysan ogayn qiimaha uu leeyahay macalin. Macalinka haweenkii ayuu u dhafraa ardaydiisa si uu u kobciyo garaadka ardiisa, asigoo marwalbo rabbo innuu horumariyo ardaydiisa. Macalimiinta habeenkii oo dhan waxay u dhafraan cashirkii ay u bixini lahayeen ardaydooda, iyagoo raadinaayo cashirka ugu fudud ee ardayda u leh munafacaad fiican, waliba midka ugu fudud oo …
Calaamadaha: Calaamadaha la arko marka xubinta taranka haweenka cudur hayo waxaa ka mid ah: Xubinta taranka haweenka oo cun cunta, gubasho xubinta dhexdeeda ah, xanuun iyo dheecaan ka yimaado xubinta, waana sababaha ugu badan ee haweenka u raadiyaan inay la tacaalaan, waxaana inta badan keena cuduro ku dhaca xubinta taranka haweenka iyo caabuq keena xanuunadaas. Haweenka jooga da’da uurka lagu qaado ama xiliga ugu horeyso ee uu ku dhaco dhiiga caadada, waxaa u keena dhibatadan bacterial infection calaamada ugu caansan waa dhecaan xooga urta kalluunka oo kale leh ayaa ka yimaado laakin haweenka qaar malahan calaamado si sahlan ayaana …
Kareemada La Isku Qurxiyo, Adigoo Gurigaaga Joogo Ayaad Isqurxin Kartaa.
Leylo Maxamuud, April 29, 2017
Xaqiiqdu waxay tahay in wax cream ama daawo bilaa chimecals aysan jirin. Markay ugu yartahay waxaa lagu daraa walxaha ka iLlaaliya innuu shaygu uusan qudhmin, gaari karo ama oolli karo mudo badan iyo waliba midabada. Waa markay ugu yartahay chemicals yada lagu daro cosmatics ka maanta. Kuwaas waxaa inoo dheer chemicals khatar ah oo lagu isticmaalo, saabunaha, shampoo yada, make up iyo cosmetic yada oo dhan oo keeni kara xanuuno xun-xun sidda cancer iwm. Haddaba waxaad u baahan tahay inaad si dabeeci ah u noolaatid oo aad akhiradaada iyo caafimaadkaagaba ka talisid adigoo waliba dhalaalaya. Haddaba si aanu iskugu qurxino …